Xinhua Myanmar - ပြင်သစ်သမ္မတမက်ခရွန်က COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး အောင်မြင်ရန် ကမ္ဘာကြီးက တရုတ် နှင့် ရုရှား ကာကွယ်ဆေးများ လိုအပ်နေ
ရုရှား တရုတ်, မက်ခရွန်
ဘဲလ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲလ်မြို့၌ ကျင်းပသော အီးယူအစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်က ရောက်ရှိလာသော ပြင်သစ်နိုင်ငံသမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်အား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) WORLD
ပါရီ၊ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ) ဘာသာပြန်/ကိုငယ်
ပြင်သစ်နိုင်ငံသမ္မတအီမန်နျူရယ်မက်ခရွန်က COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးစစ်ပွဲ အောင်မြင်မှုရရှိရန် ကမ္ဘာကြီးအတွက် တရုတ် နှင့် ရုရှားနိုင်ငံတို့ မှ ထုတ်လုပ်သော ကာကွယ်ဆေးများ လိုအပ်လျက်ရှိကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာ တရုတ် ၊ ရုရှား နဲ့အတူ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားသင့်ပါတယ် ၊ ဒီလို ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုမှာ သူတို့ရဲ့ သိပ္ပံဆိုင်ရာ လေ့လာတွေ့ရှိချက်ကနေ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေအတွက် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) ရဲ့ ထောက်ခံချက်တွေ သူတို့ စတင် လိုအပ်လာချိန်မှာ ချက်ချင်းလုပ်ပေးဖို့ပေါ့” ဟု ပြင်သစ်နိုင်ငံ အပတ်စဉ်ထုတ် Le Journal du Dimanche ဂျာနယ်နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းစဉ် မက်ခရွန်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုချိန်မှာ မတူခြားနားတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရတာပါ ၊ ဒါက အချိန်ကို တွန်းလှန်ရတဲ့ တကယ့် ပြိုင်ပွဲကြီးတစ်ခုပါပဲ ” ဟု မက်ခရွန်က ဆိုသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းက ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုများတွင် “ လျင်မြန်မှု ၊ ထိရောက်မှုနဲ့ ညီညွတ်မှု” ရှိရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ပြင်သစ်သမ္မတက COVID-19 ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် ကာကွယ်ဆေးရရှိမှု အထူးသဖြင့် အာဖရိကတိုက်တွင် သာတူညီမျှရှိကြရန် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေဖြင့် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ကြရန်လည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“ အာဖရိကနိုင်ငံတွေမှာ ကာကွယ်ဆေးရရှိဖို့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။ ယင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင် အောင်မြင်စေရန် ရှေ့တိုးအားထုတ်မှုလည်း ကင်းမဲ့နေကြောင်း ၎င်းက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျန်းမာရေးကိစ္စတစ်ခုတည်း အန္တရာယ်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူး ၊ ကျင့်ဝတ်ပိုင်းမှာလည်း အန္တရာယ်ရှိနေတယ် ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ယခုလ အစောပိုင်းတွင် မက်ခရွန်သည် ဥရောပဆေးဝါးအေဂျင်က အတည်ပြုထားသော မည်သည့်ကာကွယ်ဆေးမဆို ၎င်းနိုင်ငံတွင် တံခါးဖွင့်ထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းအေဂျင်စီသည် လက်ရှိတွင် Pfizer/BioNTech ၊ Moderna နှင့် AstraZeneca ကာကွယ်ဆေးများကိုသာ မီးစိမ်းပြ ခွင့်ပြုထားကြောင်း သိရသည်။ဥရောပတွင် ကာကွယ်ဆေး မလုံလောက်မှုအပေါ် အများပြည်သူ၏ ဝေဖန်မှု မြင့်တက်နေပြီး အမြန်ဆုံး အဖြေရှာကြရန်လည်း တောင်းဆိုမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
PARIS, Feb. 16 (Xinhua) -- French President Emmanuel Macron on Sunday said that Chinese and Russian vaccines are necessary for the world to win the "war" against COVID-19.
French President Emmanuel Macron arrives for the EU summit in Brussels, Belgium, on Dec. 10, 2020. (European Union/Handout via Xinhua)
Previous Article (နိုင်ငံတကာ ကပ်ရောဂါသတင်းစုစည်းချက်) ပါလက်စတိုင်းတွင် ပိတ်ဆို့မှုအမိန့်ကြေညာချက်အား သက်တမ်းထပ်မံတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး အရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံများတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသည့် လုပ်ငန်း ဆက်လက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်
Next Article အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ သမ္မတက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် ကာကွယ်ဆေး ပထမအကြိမ်ထိုးနှံမှုခံယူ